‘पूरानै शैलीको ‘प्लानिङ’ले हामीले चाहेको विकास कठिन हुन्छ, अर्थमन्त्रीले यसमा ‘रिलुक’ गर्नुपर्छ’ |
‘पूरानै शैलीको ‘प्लानिङ’ले हामीले चाहेको विकास कठिन हुन्छ, अर्थमन्त्रीले यसमा ‘रिलुक’ गर्नुपर्छ’
कर्पोरेट नेपाल २४ फाल्गुन २०७४, बिहीबार २४ फाल्गुन २०७४, बिहीबार अन्तरवार्ता
नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले नयाँ सरकार पनि बनेको छ । धेरैको आशा र अपेक्षा के छ ? भने अबको सरकार स्थिर हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक विकासलाई गति दिन्छ । लगानी प्रवद्र्धन हुन्छ । रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन्छ । जनतामा बिगतमा जस्तो अस्थिरता र द्धन्द्ध अब अन्त्य भएर विकासका योजनाहरु सहजरुपमा अघि बढ्छ भन्ने आशा पलाएको छ । धेरैलाई आशा पलाएको बेला त्यो आशा सफल हुने स्थिति छ किन छैन ? भन्ने विषयमा नेपालको पहिलो र एकमात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) विज्ञ डा. सरोज कोइरालासँग केही दिनअघि कर्पोरेट नेपाल डटकमको टेलिभिजन कार्यक्रममा गरिएको कुराकानी सारः
तपाईं नेपालको पहिलो र एक मात्र एफडीआई विज्ञ अर्थात प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषयमा विद्यावारिधि गरेको मान्छे । हामीलाई भन्दिनु न अबको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा कत्तिको स्वदेशी विदेशी लगानी विस्तार हुने संभावना देख्नुहुन्छ ?
पहिले र अहिले पनि यहाँ सम्भावना प्रशस्त छ । तर, सम्भावनालाई कसरी वैदेशिक लगानीमा रुपान्तरण गर्ने ? भनेर त्यसका लागि हामीले गृहकार्यका साथै वातावरण बनाउनमा नयाँ सरकारले यथेस्ट ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले वैदेशिक लगानीको लागि लगानी बोर्डको स्थापना गरेको आठ वर्ष भइसक्यो । तर, पनि किन लगानी भित्र्याउन सकेनौं ? यसमा व्यापकरुपमा मूल्याङकन गर्नुपर्छ । हामीमा के के कारणले वा ल्याकिङले गर्दा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न सकेनौं ? जबकी, छिमेकी देश चीन र भारत संसारकै धेरै वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्ने देश हुन् । अहिले स्थिति कस्तो छ भने उनीहरु नै धेरै भन्दा धरै लगानी विदेशमा गरिरहेका छन् । जबकी नेपालमा उनीहरुको आँखा पर्न सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रो वैदेशिक लगानीको धारणामा र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्यो । हाम्रा सम्भावनाहरु के के हुन भनेर पहिचान गर्न सक्नुपर्यो । हामीसँग भएका प्रडक्टलाई म्यापिङ गरेर मार्केटमा लगेर कतिको मार्केटेबल छ ? भनेर पहिचान गर्न सकेमा मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ । यस विषयमा गहन रुपमा छलफल आवश्यक छ । नत्र वैदेशकि लगानी भित्रिनका लागि अलिकति समय लाग्छ ।
विगतमा लगानी बढ्न नसक्नु, आर्थिक विकासले गति लिन नसक्नु, बनेका नीति र योजनाको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो ?
सबैभन्दा पहिलो कारण के हो भने बैदेशिक लगानी किन आउने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर संसारलाई दिनुपर्छ । इन्भेष्टरहरु किन आउँछन त ? वा लगानी किन आउँछ ? उनीहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको लगानीको प्रतिफल वा नाफा कमाउनु हो । हामीले कसैलाई अथवा विश्वभरका लगानीकर्तालाई बताउन नसकेको भनेको यहाँ आएर लगानी गर, नाफा कमाउ भन्न नसक्नु नै हो । हामीले स्पष्ट रोडम्याप बनाउन नसक्नु नै र विश्वमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु नै ठूलो समस्या हो । यहाँ भएका लगानीका सम्भावनाहरुलाई पहिचान गर्न नसकेर उनीहरुलाई इन्भाइट गर्न सकेनौं ।
विकास नहुनुमा कोहीले राजनीतिक दललाई दोष दिन्छन । कसैले व्यवस्थालाई दोष दिन्छन । कसैले कर्मचारीतन्त्रलाई । कसैले नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिलाई । विकास नहुनुको वास्तविक समस्या चाहीं के हो ?
एसियाकै दोस्रो हाइड्रोलिक पावर भनेको नेपालको फर्पिङ हो । त्यो बनेकै करिब एक सय पाँच वर्ष भइसक्यो । त्यसपछिको एक सय वर्षको अवधिमा जम्मा हामीले सात सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्यौं । किन यस्तो ढिलाई भयो त ? हाम्रो विकासको स्पिड किन यस्तो भयो ? यदी स्थायित्व नै विकासको सुचक हो भने पञ्चायत कालमा एउटै शासन ३० वर्षे लामो पनि थियो त । त्यसबेला विकास हुनुपर्ने हो नि ? यदी स्थायित्व नै विकासको मापदण्ड हो भने पहिले बनेका ४०, ४५ वटा उद्योगधन्दाहरु जब रामशरण महतको नुवाकोट इकोनोमीमा गयौं, त्यसपछि बेचियो । अर्थात, निजी क्षेत्रले जब लियो, त्यसपछि त्यो पनि सस्टेन हुन सकेन । लामो प्रोसेस हेर्दा धेरै कुरा इम्प्लेमेन्टेशन गाह्रो छ भन्ने देखिएको छ । जुन प्लानिङ बनेका छन्, त्यसमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्लानिङ हामीले गरिरहेका छौं । हामीले बनाएका प्लानिङ नै गलत गरिरहेका छौं । या त इम्प्लेमेन्टेशन गर्न नसक्ने प्लानिङ हामीले गरिरहेका छौं । या बनाएका प्लानिङलाई नै रिभ्यु गर्न आवश्यक छ । रिभ्यु गर्यौं भने अनि था हुन्छ कहाँ ल्याक भएको छ ? विकास भनेको त प्लानिङमा निर्भर हुन्छ र नयाँ आएको सरकारले जुन संमृद्धिको लागि आएको हो, जनताले संमृद्धि कै लागि सरकारमा स्वीकार गरेका हुन् । यो सरकारले भएका ल्याकिङमा ध्यान दिनुपर्छ । खुसीको कुरा अर्थमन्त्री त विज्ञ आउनु भएको छ उहाँले यसमा रिलुक गर्न आवश्यक छ ।
नीति र कार्यशैलीमै समस्या भन्नुभयो तपाईंले । नेपालले विगतमा अंगिकार गरेका सबै नीति र कार्यक्रमहरु असफल थिए वा उपयुक्त थिएनन भन्न खोज्नुभएको हो ?
असफल हैन । किन हामी पूर्णरुपमा सफल हुन सकेनौं ? आज योजना आयोग बनेको ६० वर्ष हुदाँ पनि संसारकै गरिब राष्ट्र भएर बस्याछौं भने अझ पनि हामी यो अवस्थामा छौं भने…… । हामीले हाम्रो क्षमतामा प्रश्न गर्नै पर्दैन । हामीले के गर्यौं त ? किन हामी गरिब राष्ट्रमा परिणत भयौं ? जबकी हामीसँग यस्तो राम्रो नेचुरल रिसोर्स छ । हामीसँग संसारकै उत्कृष्ट भूराजनीतिक अवस्था छ । जलस्रोत पनि राम्रो अवस्थामा छ । नेचुरल र अननेचुरल स्रोत…। म्यानपावर हामी विदेश पठाउँछौं र उनीहरुले पठाएको पैसाले घर चलाउँछौं । साधारण कुरा भन्दाखेरी हामी निर्यातमुखी कृषिबाट अहिले आयातमुखी कृषिमा आएका छौं । पहिले हामी थाल पनि बनाउथ्यौं । चामल पनि फलाउथ्यौं । तर, अहिले थाल पनि बाहिरबाट आउँछ र चामल पनि बाहिरबाट आउँछ । हामी खान्छौं । तपाईं हामी बसेर डिसिजन गर्ने डाइनिङ टेबल पनि बाहिरबाट आउने गर्छ । प्लानिङ लेभरदेखि नै यो समस्या किन देखियो ? भने हाम्रो प्लानिङ नै खुद्रे प्लानिङ भयो । यो कामहरु कसले गर्दै आए भने नेशनल प्लानिङ कमिसनले कन्सल्टेन्टवाला प्लानिङ गर्दै आए । हामीले अल्टरनेटिभ तरिकाले सोचेनौं । हामीले लङ र वा सट रनको लागि प्लानिङ सोचेनौ जस्तो मलाई लागि राख्याछ ।
आर्थिक विकासमा यति धेरै समस्या देखिरहँदा, तपाईंको वैकल्पिक योजना चाहीं के छ ?
मेरो रिसर्चले के भन्छ भने नेपालमा विकासका लागि प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधन छ । जसको दोहन भएको छैन् । सम्भावना छ विकासका लागि । एउटा साधारण कुरा नेपालको नदिबाट बग्ने पानीको दुई प्रतिशतमात्र नेपालले प्रयोग गरेको छ । तर, भारतले १३ प्रतिशत प्रयोग गरेको छ भने ९८ प्रतिशत पानी त नेपालको खेर गइरहेको छ । विदेशमा कार्यरत ८० लाख नेपाली श्रमिकलाई फिर्ता बोलाएर देशमै पसिना बगाउन किन नलगाउने ? त्यो श्रमलाई नेपाली बजारमा नेपाली माटोमा किन पसिना बगाउन नलाउने । हाम्रो जति पनि योजना छन सब साना छन् । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्ममा आएको बेलामा चारवटा मात्र विकासका पक्ष भन्दा अरुमा कसैले बोल्दैन । जस्तो कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतमा मात्र लगानी गर्ने हो भने विकास सजिलै हुन्छ । यी चारवटा खम्बालाई मात्र प्राथमिक्ता दिन पर्यो नि । पर्यटन बढ्दा उद्योग कसरी बढ्छ ? उद्योग बढ्दा जलविद्युत कसरी बढ्छ ? भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । उनीहरु बीचको इन्टररिलेसन काहाँ छ ? हामीले हेर्या छौं कि छैनौं ? यदी छौं भने ३० वर्षको अवधिमा के हेरेर बस्यौं छ ?
योजना बनाउँदा निरपेक्षरुपमा अब नेपालका लागि मात्र बनाएर पुग्दैन । ग्लोबलाईजेसनको बेलामा हामीले नेपालका सीमा जोडिएका नजिकका भारतका र चीनका प्रदेशलाई समेत समेटेर योजना बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले बनाएका योजना साना क्षणिक योजना वा खुद्रे योजना मात्र बनाएका छौं । त्यो पनि आफैले अब योजना बनाउँदा एक वा दुई वटा यस्ता योजनाको खाँचो छ, जसले सबैलाई समेटोस । समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई र विकासलाई समेटोस । यसका लागि महत्वपूर्ण कुरा फेरि योजना बनाँउदा प्रविधि र पैसाको म्यानेजमेन्ट र म्यानपावर पनि आवश्यक पर्छ त्यो हामीले बिदेशबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसकारण पनि अहिले आएर नयाँ सरकारले बैदेशिक लगानीलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । अर्थमन्त्रीले बनाएको पाँच बुदे कार्यक्रममा पनि बैदेशिक लगानी परेको छ । उहाँले भन्नु पनि भएको छ बैदेशिक लगानी ल्याएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जन गर्ने र आर्थिक विकासका काम गर्ने ।
तपाईंसँग भएको जुन सोच छ । जुन योजना छ । त्यसलाई लागू गर्न त तपाईंलाई अहिलेको सरकारले सुन्नुपथ्यो । तपाईंलाई भूमिका दिनुपर्यो । त्यो संभावना छ त ?
यो सम्भावना छ । एउटा सानो कुरा के छ भने अहिलेसम्म जति सरकार थिए, कोही कांग्रेसका थिए कोही कस्का थिए । त्यो दलका सरकार थिए । अहिलेको सरकार नेपालको वा राष्ट्रिय सरकारको भान भइरहेको छ । अहिले बल्ल मलाई फिल भइरहेको छ राष्ट्रको लागि काम गर्न लागेको सरकार जस्तो । दलीय दल दलबाटमाथि उठेर एउटा विज्ञ अर्थमन्त्रीमा आउनु भएको छ । उहाँलाई ज्ञान छ र अनुभव पनि छ । यस्तो मान्छे सतहमा जब ड्राइभिङ चियरमा आउँछन समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव परिसकेको छ । उहाँले अब आवश्यकता अनुसारको मान्छे ल्याउनुहुन्छ । सम्पूर्ण इकोनोमिमा यसको माइन्ड सेट पोजेटिभ भइसकेको छ । उहाँलाई धेरै कुरा था छ । त्यसैले उहाँले त्यसै अनुसारको मान्छे खोज्नुहुन्छ । इकोनोमीमा माइन्डसेट हुनु भनेको पनि ठूलो कुरा हो । यसले पक्कै पनि नयाँ सोच ल्याउछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
योजना बनाएर मात्रै विकास हुने हो र । योजना त विगतका पनि नराम्रा होइनन नि । मुख्य कुरा त कार्यान्वयनको हो ? सबैले इमान्दार भएर काम गर्ने हो । भ्रष्टाचार नहुने हो भने त विकास त्यसैपनि हुन्छ नि होइन र ?
भ्रष्टचारको अत्य विकासको लागि राम्रै हो । तर, इमान्दार मात्र भएर पनि विकास हुँदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीसँग के छ ? भन्ने कुरा हामीले थाहाँ पाउनुपर्छ । जुन कुरामा हामी बलियो छौं, जुन कुरा हामीसँग उपलब्ध छ, त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नु नै पोजेटिभ हो । भएका स्रोत साधनले नै विकास गर्ने हो । जो मान्छे जा लड्यो, त्यहींबाटै उठ्ने हो । विकासको लागि महत्पूर्ण कुरा हामीसँग भएका साधनलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । हामीसँग भएका साधनमाथि जब नीति कार्यक्रम बनाएर जान्छौं, तब विकास हुन्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य भएरै मात्र विकास हुने हैन । किनकी धेरै मुलुकमा भ्रष्टचार छैन तै पनि विकास भएको छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा प्लानिङ नै गहिरो हुनपर्यो । मेकानिजमदेखि कार्यन्वयनसम्ममा जाँदा उत्कृष्ट भूमिका खेल्नुपर्छ । सिंहदरवारदेखि जनताको घरसम्म लिएर जानको लागि सक्षम हुनुपर्छ ।
तपाईंले अघि नै पनि भन्नुभयो नेपाल जलस्रोतमा पनि सम्भावना भएको देश हो । सँगसँगै पर्यटनमा पनि सम्भावना भएको देश हो । तपाईंको दृष्टिमा हाम्रो संभावना के हो ?
जलस्रोतमा परक्यापिटा सरफेस वाटर हेर्यौं भने नेपाल विश्वको दोस्रो धनीमा पर्छ । हामीसँग जलस्रोतको अपार भण्डार रहेको छ । मैले अघि नै पनि भनें दुई प्रतिशत हामीले प्रयोग गरेका छौं । सिंचाइमा हामीले जम्मा १८ लाख हेक्टर मात्र प्रयोग गर्न सकेका छौं । अल वेदर सिंचाइ नै छैन । जलस्रोतको एउटा मात्र प्रयोग भनेको हाइड्रो पावर मात्र हैन । सिंचाइ मात्र हैन । यसलाई धेरै प्रकारमा प्रयोग गर्न सक्छौं । भारत वाटरवेजमा गइरहेको छ । चाइना पनि वाटरवेजमा गइरहेको छ । जसले गर्दा लजिस्टिक कस्ट नै कम हुन्छ । हामीले पानीलाई हाइड्रो पावरमा प्रयोग गरेर वाटर वेजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, फेरि उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छौ र त्यही पानीलाई सिंचाइमा प्रयोग गर्न सक्छौं । यसरी जलस्रोतलाई नै धेरै मोडलमा प्रयोग गर्न सक्छौं । काहाँबाट सुरु गरेर काहाँ अन्त्य गर्ने ? भन्ने थाहा नपाउँदा मात्र पछि परिएको हो । यसका लागि प्लानिङमा जानुपर्छ । प्लानिङ जबसम्म पूरा हुँदैन नी तबसम्म हामीलाई गाह्रो छ । तर, सम्भावना धेरै छ । कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मात्र हो ।
छिमेकी देशको कुरा पनि आयो अघि । छिमेकीकै कुरा गर्दा भारत र चीन भनेका दुई ठूला अर्थतन्त्र । दुई ठूला बजार पनि । हामीले त्यो संभावनालाई प्रयोग गर्न नसक्नुको कारण के हो
हामीसँग भएको स्रोत साधन कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं ? हामीले चाइनामा कुन प्रडक्ट दिन सक्छौं भन्नेमा स्पस्ट हुनुपर्छ । नेपाल चाइना र भारतको गेटवे भएर भारतको सामान चाइना र चाइनाको सामान भारतलाई दिएर हामी फाइदा लिन सक्छौं । एक ट्रिलियनको विजनेश अहिले भारत र चीनको बीचमा सुरु भइसकेको छ । साधारण कुरा ग्वान्जाउदेखि दिल्ली जानलाई १२ सय किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ । यस्लाई हामीले रिरुट नेपाल गर्न सक्यौं भने आर्थिक विकास सम्भव छ । भारतको सामन नेपाल ल्यायर चाइना पठाउने र चाइनाको सामन नेपाल ल्यायर भारत पठाउन सक्ने खाल्को प्लानिङ आवश्यक छ । अब त नेपालमा रेल आउँदै छ । नेपालमा त प्रतिवर्ष ७० हजार कन्टेनर सामान भित्रिन्छ । भोलि चाइना र भारतबाट त सामान ल्याएर आउछ रेल । तर नेपालबाट खाली जाने ? त्यसको ठाउँमा नेपालले दुई देशको मध्यस्थता गर्न सक्यो भने…..।
यसो गर्न सके लजिस्टिक कस्ट नै कम हुन्छ । हल्दियादेखि नेपालमा आउने सामानको कस्ट डबल पर्छ । यो विषयमा एकपटक समग्र रुपमा विचार गर्नुपर्छ । त्यसलाई त सम्बन्धित ठाँउमा बस्नेहरुले हेर्नुपर्छ नि । हाम्रो पैसा कुन कुन ठाउँमा वेष्टेज भइरहेका छ ? स्रोत कुन कुन ठाउँमा वेष्ट भएका छन् ? यो विषयमा समग्रमा हेर्नुपर्छ । पूर्वाधार पनि सडक यातायात, वाटर वेज, रेल यातायातसम्म जाँदा कुन कुन वेष्टेज भइरहेको छ ? एउटै ठाउमा डुप्लिकेशन भएको छ की छैन ? जस्तो काठमाडौं जोड्ने सडक छ वटा बनेका छन् । पृथ्वी राजमार्ग, खुरकोट, कान्ति राजपथ, तराईको फास्ट ट्रयाक, सिन्धुली र मुग्लिनको बाटो । सबै बाटो आवश्यक हो त ? एउटै राम्रो बनाउनुपर्ने हो कि ? एयरपोर्टको कुरामा निजगढ पोखरा जस्ता विमानस्थलको आवश्यकता छ । तर, साना विमानस्थलहरु अबको २० वर्ष पछिको लागि बनाइएको हो त ? अबको २० वर्षपछि त बुलेट ट्रेन बनेपछि काठमाडौंदेखि नेपालका जुनसुकै ठाउँमा जान पनि एक घण्टाको समय त हो नि । पछिको समयमा आन्तरिक यात्रुहरुले विमानस्थलबाट यात्रा गर्छन कि गर्दैनन् ? हामीले योजना बनाउँदा २० वर्षपछिको लागि हेरेर बनाएका छैनौं ।
अब लगानी र्बोडको कुरा गरौं । तपाईं लगानी बोर्डको सिइओको लागि पनि प्रतिस्पर्धा गरेर पहिलो नम्बरमा नाम निकालेको व्यक्ति । भलै सरकारले तपाईंलाई छनोट गरेन । तपाईंलाई सोही ठाउँमा काम गर्न सरकारले भूमिका दियो भने तयार हुनुहुन्छ ?
त्यो त मेरो स्पेलाइजेसनको विषय नै भयो । सरकारले सोच्ने कुरा हो । तर, लगानी बोर्ड मेरो लागि एक उपयुक्त ठाँउ हो । मैले रिसर्च पनि त्यस विषयमै गरेको हो । पीएचडी पनि त्यस विषयमै गरेको हो । किनकी म त्यस विषयमा जानकारी राख्ने गर्छु ।
कतिपयले लगानी बोर्ड जरुरी छ भन्छन । कसैले जरुरी छैन भन्छन । काम गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालयहरु र लगानी बोर्डबीच टसल जस्तो देखिन्छ । बोर्डको आवश्यकता र भूमिकालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालमा मात्र हैन संसारभरी नै लगानी बोर्ड छ नि । देशको इन्टरनल स्रोत मोभिलाइज गर्नको लागि बोर्डले भूमिका खेल्नसक्छ । हामीसँग यस्ता प्रडक्ट छन् यहाँ आएर लगानी गर भनेर विश्वलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्यो । यस्ता प्रकारका योजनाहरु तयारी अवस्थामा छन् भनेर भन्न सक्नुपर्छ । ठूला योजनाका लागि संसारलाई यसमा लगानी गर, लगानी गर्यौं भने प्रतिफल पाउछौ भन्नुपर्यो । अनी मात्र लगानीकर्ता आएर लगानी गर्छन । हाम्रो प्रतिफल राम्रो भएपछि मात्र विश्व बजारमा नेपालमा लगानीको लागि हल्ला फैलिन्छ । लगानी बोर्डका मान्छेले बोर्डको अहिलेसम्मको विकासमा के भूमिका रह्यो । त्यो उनीहरु आफैले विचार गर्ने हो । मैले केही भन्न मिल्दैन । चियरमा बसेर के के गरे भनेर आफैँ अनुमान गर्नुपर्छ ।
अन्तिममा भनिदिनु न दलहरुले जुन अहिले महत्वाकाँक्षी योजनाहरु लिएका छन् आफ्नो घोषणापत्रमा । त्यसलाई सफल बनाउने सुत्र हामीले पहिल्याउने कसरी हो ? के गर्नुपर्छ ?
अरुको घोषणापत्र बारेमा भन्ने कुरै भएन । अहिले बामगठबन्धनको घोषणापत्र महत्वकांक्षी छ । त्यसमा कुनै पनि प्रबलम छैन । दश वर्षमा पाँच हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्याउने जस्ता लक्ष्य छन् । अलिकति महत्वकांक्षी हुन । तर यसलाई सफल तुल्याउन हामीले कृषि, उद्योग, उत्पादन, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ । यस्ता चार वटा क्षेत्रमा लगानी गरियो भने सकिन्छ । तर, यसलाई परम्परागत ढंगले हुँदैन । तीन वर्षे पूराना प्लानिङ फेर्न सक्यौं भने हुन्छ । किनकी घोषणापत्रमा नहुने असम्भव खालको योजना हैन । अर्थमन्त्री विज्ञ आउनु भएको छ । अब उहाँले आउट अफ बक्स सोचेर सबै सेक्टरलाई समेटेर लान सक्नुपर्छ । उत्तर र दक्षिण वा चीन र भारतलाई समेत समेटेर योजना बनाउन आवश्यक छ ।
अबको वाम–अर्थतन्त्रप्रति सतिशकुमार मोरको यस्तो छ दृष्टिकोण
त्यतिबेला ठूलाबडाको घरघरमा गरगहना पुर्याइदिनुपथ्र्यो– तेजरत्न शाक्य
नेपालमा एक खर्ब ५१ अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीः अध्ययन
‘जलविद्युतमा ‘एफडीआई’ नआउनुमा राजनीतिक र झन्झटिलो प्रशासनिक…
संघीयतामा खर्चको डुप्लिकेशन हुने संभावना धेरै छः गोविन्द नेपाल
नीजि क्षेत्रको सरकारसँग अपेक्षा: आर्थिक समृद्धिसँगै लगानी मैत्री वातावरण